Tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း: October 2009
ခရီးသွားဧည့်သည် အမှတ်တရ နုတ်ဆက်ပွဲ
တွေ့ကြုံဆုံကွဲးဖြစ်မြဲးဓမ္မတာမို့ တခဏတာဆုံတွေ့ပြီး တချိန်ချိန်မှာခွဲးခွာကြရစမြဲးပါ အဲ့ဒီခွဲးခွာရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ
ခုအချိန်မှာကျနော့မိတ်ဆွေ စိုင်းလောင်ဆိုင် ၅.၁၁.၂၀၀၉ နေ့မှာ USA ကိုအခြေချနေထိုင်ဖို့ ထွက်ခွာသွာရတော့မှာမို့
ဘာကြောင့်ဝမ်းနည်းရလဲးဆိုတော နှစ်ရှည်လများအတူနေခဲ့ကြပြီး မိတ်ဆွေကောင်းဆုံရှူံးရတောမှာမို့ပါ..
စိုင်းလောင်ဆိုင် မိသားစု့အတွက် ဒီစာနဲ့ဘဲး နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်..
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 9:57 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ရှမ်းလူမျိုးတို့၏ သမိုင်းကြောင်းအား လေ့လာမည်ဆိုပါက အနည်းဆုံး ဘီစီ ၆၅၀ အထိ သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်များ ရှေးခေတ် ဘီစီ ၅၀၀၀ ခန့်က ရှမ်းဘုရင်တစ်ပါး၏ ဂူအား တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ်တွင် တူးဖော်တွေ.ရှိခဲ.ပါသည်။ ထို့ပြင် တရုတ်ရှင် ဘုရင်မင်းပာန် ဘုရင်မင်းထက်ပို၍ ရှေးကျသော ရှေးပောာင်းဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပူဇော်ရာ ကြေးအိုးခွက်ပန်းကန်များကိုလည်း ရှာဖွေတွေ.ရှိခဲ.ပါသည်။ ၁၃ ရာစုမှစ၍ ရှမ်းဘုရင်မင်းသည် အင်းဝပြည် အနေဖြင်.မြန်မာပြည် တစ်ပြည်လုံးနီးပါး အုပ်ချုပ်လာခဲ.ရာ ၁၄ ရာစုနှစ် အလယ်ပိုင်းတွင် ထပ်မံ၍ နယ်မြေချဲ.ထွင်ခဲ.ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ဘက်နှင့် တောင်ပိုင်းတနသာင်္ရီတိုင်း အနောက်မြေက်ဘက် အာသံပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း လာအိုနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအထိ နယ်ချဲ.ခဲ့ပါသည်။
၁၆ ရာစု အကုန်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်သည် မြန်မာဘုရင်လက်အောက်သို့ ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီး နောင်နှစ် ၅၀ တွင် တရုတ်များ၏ လက်အောက်သို့ ထပ်မံ၍ ကျရှုံးခဲ့ပြီးနောက် ရှမ်းဘုရင်မင်း၏ အာဏာစက်ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်သည် သီးခြားတည်ရှိကြောင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုလည်းကွဲပြားကြောင်းကို တရုတ်မြန်မာနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရကပင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ငွေးစက္ကူများပင်လျှင် တစ်ချိန်တွင် အင်္ဂလိပ်၊ ရှမ်းနှင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင်ချုပ်ဆိုသော သမိုင်းဝင်ပင်လုံစာချုပ်သည် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြား ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှထံမှ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သော်လည်း ၄င်းကောင်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် ကုလသမဂ္ဂရုံးတွင် ယခုချိန်ထိရှိနေသေး၏။ ၄င်းဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအ ရ ၁၉၄၈ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ၁၀ နှစ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်သည် ခွဲထွက်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ လူသည် စုစည်း၍ နေနိုင်သကဲ့သို့ ခွဲထွက်ရာ၌လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် လွှတ်လပ်ရေးမရမှီ တစ်နှစ်ပါတ်လုံး ရှမ်းပြည်နယ်၏ ၀ါ၊ စိမ်း၊ နီ အရောင်များဖြင့် ပြုလုပ်သော အလံသည် လန်ဒန်မြို့တွင် လောဒ်ဘော့တွမ်လေ ( Lord Bottomley ) အပါအ၀င် ဗြိတိသျှ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ ရှေ့မှောက်၌ ဗြိတိသျှ ယူနီယံ ဂျက်အလံအား ဖြုတ်ချပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အလံအား လွှင့်တင်ခဲ့သည်မှာ ဗြိတိသျှ အစိုးရ၏ ရှမ်းပြည်နယ် အပေါ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပုံကို တွေ့ရသည်။
၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်သည် ကူမင်တန် ကွန်မြူနစ်များအား တိုက်ထုတ်ရန် အကြောင်းပြလျက် ရှမ်းပြည်နယ်ကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူ ခဲ့ပါသည်။ ၁၀ နှစ်အကြာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်သည် တစ်ဖက်သတ် အာဏာသိမ်းယူကာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ရှမ်းပြည်နယ်သည် မြန်မာစစ်တပ်၏ ၀င်ရောက်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်မှုနှင့် ဖိနှိပ်မှုတို့ကို ခုခံလျက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မိမိတို့မျှော်မှန်းထားသော လွှတ်လပ်သော ပြည်နယ်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းခုခံကာကွယ်ရေး တပ်မတော် - မုန်းတိုင်းတပ်မတော် (MTA) ကို ခွန်ဆာ ဦးဆောင်၍ မြန်မာအစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနှင့် တိတ်တဆိတ် ဆက်နွယ်ခဲ့ပြီး နောက် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအ ဖွဲ့လက်ထက်တွင် လက်နက်ချခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း မြောက်များစွာသော မုန်းတိုင်းတပ်မတော် တပ်သားများသည် လက်နက်ချရန် ငြင်းဆန်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသို့လည်းကောင်း၊ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်သို့လည်းကောင်း ရွှေ့ပြောင်းကာ အခြားခုခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များ နှင့် ပူးပေါင်းမိခဲ့ပါသည်။ မကြာမီအချိန်တွင် ၄င်း မပာာမိတ်တပ်သည် ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ၁၉၉၆ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းအထိ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့သည် ၄င်း ခုခံတိုက်ခိုက်ရေးတပ်များအား ရှမ်းပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ကူညီထောက်ပံ့မှု မပြုနိုင်ရန် ဖြတ်တောက်ပစ်ခြင်း၊ ရှမ်းကျေးရွာ တစ်ရွာလုံးအား အတင်းအဓမ္မပြောင်းရွှေ့စေခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအစိုးရ၏ မူဝါဒမှာ ပြည်သူတို့ အား ခွဲထုတ်ရေး၊ မိမိနှစ်သက်သမျှအတိုင်း ဖမ်းဆီးရေး၊ နှိပ်စက်ခြင်း၊ လူအသေသတ်ခြင်း၊ လုယက်ဖျက်စီးခြင်း၊ မုဒိမ်း ကျင့်ခြင်းနှင့် ပြည်သူပြည်သားများအား ပေါ်တာထမ်းစေခြင်းဖြင့် ဓါးစာခံ ဘ၀သို့ ရောက်ရှိစေရန် ယနေ့အချိန်ထိ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါသည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 8:19 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Amount lost in junta’s Four Cuts campaign recounted
Wednesday, 21 October 2009 10:19 Hseng Khio Fah
Updated reports on the Burma Army’s 5-day scorched earth campaign, also known as Four Cuts - cutting off food, funds, intelligence and recruits by local villagers to the resistance, 27 July – 1 August, in townships in southern Shan State, have confirmed the loss of the villagers in one village tract alone at around Kyat 700 million (US$ 700,000).
An informed source in Mongkeung reported that the total affected houses and belongings of the villager in Hokhai village tract were 125 houses,3rice mills, 596,330,666 liters of paddy (11,812 Tin),3bullock carts,6motorbikes and one farm tractor (Tolaji).
“The total amount was at Kyat 699,420,000. It did not include the amount being robbed by the Burmese soldiers,” he said.
He added that there wasavillager whose gold and money was being robbed while she was trying to escape the incident. “The gold was2Kyattha (3.26 gram) and her money was Kyat 700,000 (US$700).”
The incident took place in Mongkeung, Laikha and Kehsi townships by the battalions under the Mongnawng-based Military Operations Command #2of Col Kyaw Zan Myint in accordance with the order of the Chairman of Shan State (South) Peace and Development Council and Commander of Eastern Region Command Brig-Gen Ya Pyae. But the Burma Army later told villagers, inapublic meeting, that the campaign was not waged by them, it was the Shan State Army members.
A month later, the MOC#2 was assigned to rebuild houses for those affected villagers. All houses must beatwo story made of wood designated on Nargis home model and must be finished by September. However, the construction project was just started early in the month.
Victims were being told that they will receive the houses free of charge. But local traders and nearby villages were forced to provide hundred tons of wood for rebuilding houses.
And over 500 carpenters from Taunggyi were ordered to help the construction. Currently, 10 out of 125 affected houses in Hokhai village tract were almost finished and one other finished.
Each house is 15 feet in length and 20 feet in width.
Up to date most villagers are still staying in temporary shelters they built themselves in their fields and some are still in their farms.
However, they are being forced to continue the construction. Moreover, they were told to provide one cow to local based Light Infantry Battalion (LIB) 517, every two weeks, saidavillager in Hokhai.
The project does not seem succeed as almost all of the carpenters were reportedly turned back and traders also stopped providing woods because most did not get paid by the officials. And the officials were reported to have quarreled with each other over the unbalance of the power sharing, according to another source.
“An official from the municipality was slapped by the battalion commander Major Kyaw Thu,” he said. “After that many of the civilian officials left.”
According to the rights groups Shan Human Rights Foundation (SHRF) and Shan Women’s Action Network (SWAN)’s report, more than 500 houses and 200 granaries in villages in Mongkeung, Laikha and Kehsi townships, where the campaign took place, had been razed to the ground and over 10,000 people from almost in villages in the townships were homeless.
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 2:52 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အရှင်ဆန္ဒာဓိက အမေရိကတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ထပ်မံခံယူ ဓာတ်ပုံသတင်း
အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၀၉ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရောက် နာမည်ကျော် ရွှေပါရမီတောရ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ရောက်ရှိစဉ် ညာဘက် ခြေကျင်းဝတ် နှင့် ခြေဖမိုးတို့ကို ခွဲစိတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့က ခွဲစိတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး တလခွဲတိတိ ညာဘက်ခြေထောက်ကို လုံးဝ မထောက်ရန် ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားသည်ဟု ယနေ့ထုတ် အလင်းတန်းဂျာနယ်တွင် ရေးထားသည်။
အရှင်ဆန္ဒာဓိကသည် လွန်ခဲ့သည့် ၄ လခန့်က မုံရွာမြို့ ဗောဓိတထောင် ဘုရားရှိ ရပ်တော်မူ ဆင်းတုတော်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော မတော်တဆမှုကြောင့် ခြေထောက် ထိခိုက်သည့် ဒဏ်ရာ ရရှိပြီး မြန်မာပြည်တွင် ကုသမှု ခံယူခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသူများထဲတွင် ကလောင်အမည်“ရဝေနွယ် (အင်းမ)” ဟု ထင်ရှားသည့် အရှင်ရာဇိန္ဒလည်း ပါဝင်သည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 12:56 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
သျှမ်းအကြောင်းသုတေသနညီလာခံ ချူလာလုံးကွမ်း တက္ကသိုလ်၌ကျင်းပမည် တနင်္လာနေ့၊ 05 အောက်တိုဘာလ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းအကြောင်းသုတေသနညီလာခံ (ပွဲတော်) တရပ်ကို ဘန်ကောက်မြို့Maha Chulalongkorn building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University ၌ ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာလ ၁၅-၁၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဟုပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီက ပြောပါသည်။
“အရင်တုန်းကသျှမ်းလို့ပြောရင် တိုက်ပွဲအကြောင်း၊ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမား၊ ဒုက္ခသည်အကြောင်းတွေဘဲ လူသိများပါ တယ်။ အခုသူများမသိသေးတဲ့ သျှမ်းတွေရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ၊ ရိုးရာဓလေ့၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ သမိုင်းကြောင်း၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အခြားအကြောင်းတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲနဲ့ပြပွဲတွေခင်းကျင်းပြသဖို့ ရှိတယ်” - ဟု စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Chulalongkorn University မှ Asia Studies ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာဆူနိတ် ကပြော၏။
[၁၅-၁၇/၁၀/၀၉ ရက်နေ့ကျင်းပမည့် သျှမ်းအကြောင်းသုတေသနညီလာခံ နံရံကပ်စာစောင်]
၁၅-၁၇/၁၀/၀၉ ရက်နေ့ကျင်းပမည့် သျှမ်းအကြောင်းသုတေသနညီလာခံ နံရံကပ်စာစောင်
International Conference of Shan Studies (ICSS) တွင် ထိုင်းအခြေစိုက်သျှမ်းများအပြင် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပညာရှင်များ စာတမ်းဖတ်ပွဲအပြင် သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ၊ ရိုးရာဓလေ့၊ အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ပြပွဲလည်းခင်း ကျင်းပြသသွားမည် ဟု ပြောပါသည်။
ချင်းမိုင်မှ စ၀်ခမ်းဟန်ဖှာ့ က - “သျှမ်းအကြောင်း သုတေသန ညီလာခံ (ပွဲတော်) ICSS ကျင်းပရတဲ့ အဓိကအကြောင်း ရင်း ၄ ခုရှိတယ်။ (၁) သျှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အင်္ဂါလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေမပျောက်ကွယ်အောင်မြှင့်တင် ဖို့၊ (၂) မျိုးရိုးဇာတိသမိုင်းကြောင်းကိုဂုဏ်ယူတတ်ဖို့ (၃) တိုင်း (Tai/Dai) လူမျိုး/စကားပြောတဲ့အရှေ့တောင်အာရှရှိ လူဦးရေ သန်း ၁၀၀ မှာ သျှမ်းများ တစိတ်တပိုင်းပါဝင်မှု (၄) လောဝ်၊ ထိုင်း နဲ့ သျှမ်း အကြားရင်းနှီးမှုပိုမိုနီးစပ်မှုရှိလာ အောင် မြင့်တင်ဖို့ စတာတွေအဓိကဖြစ်တယ်။ ဘယ်အတိုင်းတာအထိ လုပ်နိုင်မလဲတော့မပြောနိုင်ဘူး” - ဟုပြော ၏။
ချူလာလုံးကွမ်း တက္ကသိုလ် Chulalongkorn University မှ Asia Studies သည် မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ ကဗ္ဘောဒီးယား၊ နှင့် ထိုင်း လူမျိုးများဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို သုတေသနပြလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
“အစတုန်းက တိုင်းပြည်ရှိတဲ့ လူမျိုးတွေအတွက်ဘဲ ကျနော်တို့ ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုက သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးပြီး လက်ရှိ တိုင်းပြည်မရှိတဲ့လူမျိုးတွေအတွက်ကျင်းပပေးရတာက သူတို့တွေကို ကမ္ဘာကပိုသိအောင်ပြန်လည်ဖေါ်ဆောင် ပေးတာ ဖြစ်တယ်” - ဟု ဒေါက်တာဆူနိတ် က ဆက်ပြော၏။
လွန်ခဲ့သည့် ၃-၄ နှစ်ကလည်း International Conference of Shan Studies (ICSS သျှမ်းအကြောင်းသုတေသန ညီလာခံ (ပွဲတော်) ကဲ့သို့ ရခိုင်၊ မွန် တို့အတွက်လည်း ကျင်းပပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 1:42 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
AIDS ကာကွယ်ဆေးအတွက် အောင်မြင်မှု ပထမ ခြေလှမ်း
post by Sunday, September 27, 2009
အစိုးရထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်အများစုဟာ ဒီကမ္ဘာမြေအတွင်းမှာ လူသားတွေကို ခြိမ်းခြောက်အန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ AIDS ရောဂါကပ်ဆိုးကို ဘယ်လိုသဏ္ဍာန်နဲ့ ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ စီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သုသေသန ကွင်းပြင်ကြီးမှာ လူသားသုံးဦးကို လေ့လာစမ်းသပ်ရင်း HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ကာကွယ်ဟန့်တားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သုသေသီတွေရဲ့ ပြော ကြားချက်အရတော့ လက်ငင်းအသုံးပြုဖို့ရာအတွက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုထားပေမယ့်လို့ ၂၆ နှစ်ဆိုတဲ့ ကာလရှည်ကြာ သည့်တိုင်အောင် AIDS ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို တစိုက်စိုက်မတ်မတ် ကြိုးစားရှာဖွေခြင်းရဲ့ ရလဒ်လို့ပဲ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ သိပ်မကြာခင် အ ချိန်ကတောင် သိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများက ဒီရောဂါကပ်ဆိုးကို ကာကွယ်ဖို့ရာအတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တောင် တွေးထင်ထား ခဲ့ကြတာ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂမှ UNAIDS ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များစွာထဲက ဒီရောဂါကို ထိထိ ရောက်ရောက်ကာကွယ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် အခုလိုမျိုး တွေ့ရှိချက်အသစ်ဟာ သုသေသနနယ်ပယ်အတွက် လိုလားတဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ရာ မျှော်လင့်ချက်တွေ တစတစ ပိုမိုနီးကပ်လာတယ်လို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာ့ဆေးပညာလောကအတွက်တော့ တကယ့်ကို ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းလဲဖြစ်ရပ်ကြီးလုိ့ အမေရိကန် စစ်ဆေးသိပ္ပံခွဲစိတ်ရေးဌာနမှ ဗိုလ်ချုပ် အဲရစ်စကူးမေကာ က ပြောခဲ့သည့်အပြင် ဒီဆေးသိပ္ပံမှ ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေး ရောဂါကြီးဖြစ်တဲ့ AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတွက် သုသေသနပြုဖို့ရာ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုပြုမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ HIV ရောဂါကာကွယ်ဖို့ရာအတွက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေစုစည်းပြီး နည်းလမ်းရှာဖွေခဲ့ကြတဲ့ အထဲမှာ ဒါဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်။ မဟာဗျူဟာအရ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကာကွယ်ဆေးအတွက် သုသေသနပြုလုပ်ကြရာမှာ အသွင်မတူတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသလို အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းက တသီးပုဂ္ဂလိကဆန်ဆန် လေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့ကြ တယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုထားပါတယ်။ အသွင်သဏ္ဍာန်မတူတဲ့ HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ ၃၁% ကျော်ခန့်ကို ဒီစမ်းသပ် မှုအတွက် စိတ်ပါဝင်စားတက်ကြွသူ ၁၆,၀၀၀ ကျော် ဦးရေကို သုသေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဗန်ကောက်မြို့မှာအင်္ဂါနေ့က သုသေသီ တွေက ထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားပါတယ်။ ဆုံးခန်းတိုင်သည့် ရလဒ်မဟုတ်သော်ငြားလည်း ဒီရောဂါကာကွယ်ဖို့ရာအတွက် ထိရောက် ပြီးစိတ်ချရသည့် ပထမဦးဆုံး အထောက်အထားဖြစ်ကြောင်း သုသေသနအတွက် ဦးဆောင်ကူညီနေသူ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် ဖြစ်သူ ဗိုလ်မှူးကြီး ဂျရုမ်းကင် ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်အပေါ် အခြေခံပြီး AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတွက် ပိုမို ထိရောက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ သုသေသနဆိုင်ရာအသစ်တွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ ဒီလေ့လာမှုအတွက် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူ ထောက် ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ National Institute of Allergy and Infectious Diseases မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ အန်တော်နီဖာအူစီ ကတော့အကောင်းမြင်ရှုထောင့်ကနေ သုံးသပ်ပြောဆိုသွားတယ်။ လားရာပွင့်သွားတဲ့အတွက် မြင်ကွင်းကျယ်သွားပြီး မျှော်လင့်ချက် ပန်းတိုင်ကိုပါ ခပ်ရေးရေးမြင်နေရလို့ အတူလက်တွဲပြီး သုသေသနဆိုင်ရာ အသစ်တွေ့ရှိချုက်ကို ဖော်ထုတ်ကြဖို့ကိုပါ တိုက်တွန်း သွားတယ်။
လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း နယူးရောက်မြို့မှာ သုသေသီပေါင်းများစွာအပြင် ကာကွယ်ဆေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်နေသူ တွေနဲ့ ဒီစီမံကိန်းအပေါ်ထဲထဲဝင်ဝင် ထောက်ပံ့ကူညီမယ့် အလှူရှင်တွေ၊ AIDS ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သုသေသနလုပ်နေတဲ့ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ပမာဆိုရသော် ဘီလ် နဲ့ မလင်းဒါဂိတ် ဖောင်ဒေးရှင်းလိုမျိုး၊ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ် လို့ ကမ္ဘာ့ HIV ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာ အဲလန်ဘားန်စတိန်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ထိုင်းစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဆေးသိပ္ပံနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလိက သိပ္ပံပညာရှင်တွေပါ တက်ရောက်ကြလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေက ပထမဆုံးအကြိမ် ဒီအောင်မြင်မှုအပေါ် ချီးကျူးထောပနာ ပြုကြတယ်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေထဲက AIDS ရောဂါကာကွယ်ဆေးအတွက် ၁၀ နှစ်အချိန်ယူလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေကို ကျနော်တို့ ကြားနေခဲ့ကြရတယ်။ ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ခံစားမိတာကတော့ ကျနော်တို့ဟာ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရောက် နေပြီလို့ Access Project မှာတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်မှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်နဲ့ ရော ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံ AIDS ရောဂါကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဌာနမှာပါ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနေသူ ဂျိုးစ်ရူဇင် ကပြောပါတယ်။
ထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒီလေ့လာမှုအတွက် လမ်းညွှန်မှုတွေပေးခဲ့သလိ်ု အမေရိကန်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာကလည်း ထိုင်း အစိုးရနဲ့ နှစ်ရှည်လများပူးတွဲပြီး ကာကွယ်ဆေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနဲ့ အရပ်ဘက် ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်ဖို့ရာအတွက် အတူပူးတွဲပြီး ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အတွက်တော့ HIV ဟာအဓိကပြဿနာတရပ်လိုဖြစ်နေတော့ လေ့လာဖို့ရာအတွက် ဖိအားတရပ်ပေးသလို ဖြစ်နေတာပေါ့၊ ဒီလို ဆိုလိုက်လို့ အမေရိကန်၊ အာဖရိက ဒါမှမဟုတ်မသိမမြင်နိုင်ရတဲ့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ထောင့်တနေရာမှာ ရှိနေတဲ့ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ရာ အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအတော်လေးကို စိတ်ဖိဆီးမှုဝေဒနာကို ခံစားနေကြရရှာတယ်။
ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးမှုဟာ အဆိုးအကောင်းလို့ဆိုရမဲ့ ပါးလွှာတဲ့ခြားနားမှုကြောင့် အတော့်ကိုအန္တရာယ်နဲ့နီးကပ်တယ် လို့ဆိုရမယ်။ UNAIDS ရဲ့ခန့်မှန်းတွက်ဆချက်အရ တကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရသော် နေ့စဉ်လူ ၇,၅၀၀ ခန့်ဟာ HIV ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံနေရပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်း AIDS ရောဂါကြောင့် လူနှစ်သန်းဟာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်။ Prime-boost ဆိုတဲ့ ချဉ်း ကပ်မှုအတိုင်း နည်းလမ်းနှစ်သွယ်နဲ့ ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို စမ်းသပ်လေ့လာရာ ပထမနည်းဖြစ်တဲ့ အစကနဦးထဲက ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိ တဲ့ နည်းလမ်းသုံးပြီး HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ ဒုတိယနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ အင်အားအလုံအလောက်ရှိပြီးမှ တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက် နည်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။
ALVAC ကို ရောဂါရှာဖွေရေးနဲ့ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ ဆာနိုဖီပါစတီအာ က ပြင်သစ်လူမျိုးဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူ ဆာနိုဖီ အာဗင်တီစ်မှဖော်စပ်သလို AIDSVAX ကိုတော့ VaxGen ကုမ္ပဏီကြီးမှ အစပြုပြီးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သလို အခုနေ အခါ မှာတော့ VaxGen က ၀န်ထမ်းတချို့ဟာ လူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားက ကူးစက် ရောဂါနဲ့ သေဆုံးမှုပြဿနာတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနေတယ်။ ALVAC ကို ကနေရီငှက်ရဲ့ဆစ်ဖလစ်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှ အသွင် ပြောင်းပြီး အသုံးပြုထားတာဖြစ်သလို လူ့အသက်အန္တရာယ်ကိုတော့ ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိနိုင်ပေမယ့်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ HIV ဗီဇမျိုးစေ့ တွေဆီကို သယ်ဆောင်ကူးပြောင်းပြီးပေါင်းစပ်စေတယ်။ AIDSVAX ကျတော့ HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိတဲ့ မျက်နှာပြင် တ၀ိုက်မှာ ဇီဝဗေဒ အင်ဂျင်နီယာ နည်းနဲ့အသွင်ပြောင်းလုပ်ဆောင်တယ်။ ဒီရောဂါကာကွယ်ဆေးဟာ ဗိုင်းရပ်စ် အကုန်လုံးကို မကာကွယ်နိုင်သလို သေဆုံး ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ HIV ရောဂါပိုးကြောင့်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလေ့လာစမ်းသပ်မှုမှာ ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့် HIV အနှုတ်လက္ခဏရှိသူ အသက် ၁၈ မှ ၃၀ နှစ်အတွင်းရှိ ထိုင်းအမျိုးသားနဲ့ အမျိုး သမီးတွေကို ရောနှောပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ တ၀က်ကိုတော့ အစကနဦးထဲက ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း ALVAC ဆေး လေးခွက်စာ သောက်သုံးစေပြီး ကျန်တ၀က်ကိုတော့ ဒုတိယနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ အင်အားအလုံအလောက်ရှိပြီးမှ တိုက်ခိုက်တဲ့ AIDSVAX သောက်ဆေးနှစ်ခွက်စာနဲ့ ခြောက်လကျော်ကြာအောင်စမ်းသပ်သလို တခြားကျန်ရစ်သူတွေကိုတော့ ဟန်ပြအနေဖြင့်သာ တိုက်ကျွေးစေတယ်။ ဒီလေ့လာစမ်းသပ်မှု ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးဆုံးမယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူတဦးတယောက်မှ မသိကြပါဘူး။ စေ တနာ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ ၀င်ရောက်လေ့လာမှုပြုတွေကိုတော့ သုသေသနမပြုလုပ်ခင်ကတည်းက ကာကွယ်ဆေးအတွက် စမ်းသပ်ပြုလုပ် မှာဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးပြောကြားထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်စီတိုင်းကို ကွန်ဒုံးပေးထားခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ သက် ဆိုင်သော ပညာပေးလုပ်ဆောင်ခြင်းများအပြင် လိင်မှတဆင့် ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်ကြောင်းနဲ့ HIV ရောဂါအတွက် ခြောက်လ ကြာ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မည့် အကြောင်းသတိပေးပြောကြားမှုတွေရှိပါတယ်။ မည်သူမဆို ရောဂါကူးစက်မှုတစုံတရာရှိခဲ့ပါက ဆေးဝါး ကုသ ခံယူဖို့ရာအတွက် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာဖြစ်တယ်။ HIV ပိုးအတွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသူအားလုံးဟာ သုံးနှစ်အတွင်း ခြောက်လ တခါ လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးသက်တမ်းကာလဟာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်။
ကူးစက်မှုအသစ်အရထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်ကတော့ ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိသူတွေဟာ ၅၁ မှာ ၈,၁၉၇ ထွက်ပေါ်လာပြီး ဟန်ပြ ဆေးတိုက်ကျွေးမှုကို လက်ခံရသူတွေရဲ့ ရလဒ်ကတော့ ၇၄ မှာ ၈,၁၉၈ ပဲဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးသုံးစွဲတဲ့ အစုအဖွဲ့ဟာ ကူးစက်မှု နှုန်းထားအောက် ၃၁% ဆိုတဲ့ရလဒ် ထွက်ပေါ်လာသလိ်ု ပါဝင်သူနှစ်ဦးကတော့ ရောဂါကူးစက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးသွားရရှာတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ သဏ္ဍာန်မတူတဲ့ ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုး ဘာကြောင့်ပူးတွဲတိုက်ဖျက်ကြသလဲဆိုတာကိုတော့ အဖြေရှာမရသေး ဘူးလို့ အစိုးရဌာနမှ သိပ္ပံပညာရှင်တဦးဖြစ်ပြီး HIV ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် AIDS ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူတွေကို အကူအညီ ပေးခြင်း အပြင် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AIDSVAX အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေသူ ဒေါက်တာ ဒိုနယ်ရ်ဖရန့်စစ် ကပြောပါတယ်။ AIDSVAX ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ HIV ရောဂါပိုးကို ချက်ချင်းဆိုသလို ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ဖို့ရာအတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ ဆာနိုဖီ ရောဂါကာကွယ်ဆေးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဆွပေးပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဖရန့်စစ်ရဲ့အဆိုအရတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေကို ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့ မဟာဗျူဟာ တရပ်လို့ပဲဆိုရတော့မှာပေါ့။ ဘာကြောင့် တ ချို့တွေကြတော့ ရောဂါကူးစက်ခံရပြီး တချို့လူတွေကြတော့ မဖြစ်သလဲဆိုတာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာသူတွေ နားလည်သဘောပေါက် သိ ရှိလာဖို့ရာအတွက် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ နမူနာသွေးစစ်ချက်ကိုရယူဖို့လိုအပ်တယ်။ ကာကွယ်ဆေးပမာဏဟာ လက်ရှိအနေအထား အရတော့ အကန့်အသတ်နဲ့သာရှိပြီးနယ်ပယ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုသာ သုသေသနလုပ်ခဲ့ရပေမယ့်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကျနော် တို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဖရန့်စစ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဆာနိုဖီ က၀န်ထမ်းတွေကလည်း ဒီသဘောထားအတိုင်းပါပဲ။ ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ ဒေါက်တာ ဆန်ဂျေးဂူရန်နာသန် ရဲ့ သဘောကတော့ စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဖို့ရာအတွက် နှစ်ကာလတို စီမံကိန်းချ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်သလို ကာကွယ်ဆေးကို ဒီ့ထက်ကောင်းမွန်ဖို့ရာအတွက် တခြားသော ယှဉ်ပြိုင်ဘက်အသစ်တွေကလည်း boost နည်းလမ်းကို အခြေပြုစဉ်းစားပြီးလုပ်ဆောင်လာနိုင်သည့်အတွက် မူပိုင်ခွင့်လိုအပ်ကြောင်းကိုပါထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတယ်။ AIDS နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုသေသနကိုဒီ့ထက်ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေဟာ အခရာကျလာပြီ။
နယူးယောက် အခြေစိုက် Community HIV/AIDS Mobilization Project မှ ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးရေးအဖွဲ့မှပြောရေးဆို ခွင့်ရှိသူ ဂျူလီယာဒေးဗစ် ကတော့ ခုနေအခါ ဒီကာကွယ်ဆေးသုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းခုံပြုနေကြမယ့်အစား တွေ့ရှိချက်အပေါ် အခြေပြုပြီး တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ဖို့ကို အလေးထားပြောဆိုသွားတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီ သုသေသနပြုချက် ဘာလို့အောင်မြင်ပြီး ဆုံးသွားရသလဲဆိုတော့ AIDS ရောဂန္တရကပ်ဆိုက်တဲ့ ဗဟိုချက်မဟာ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင် တွေဟာ သုသေသနကိုလာရောက်လုပ်ကိုင်တာဖြစ်သလို ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးဖို့ရာအတွက် မျိုရိုးဗီဇဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်သလို ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ သုသေသနလုပ်ဖို့ရာအတွက် အကြံဥာဏ်အပြင် အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့မှု တွေ ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။ AIDS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပွဲဦးထွက်သုသေသနပြုလုပ်ထဲက ထိုင်းအစိုးရဟာ အောင်မြင်မှု တွေရခဲ့တယ်။ ဒီလေ့လာမှုတခုလုံးအတွက် ၁၆,၀၀၀ ထက်မကတဲ့ လူပေါင်းများစွာရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြောင့် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၁၂၅ ယောက် ထွက်ပေါ်လာသလို မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကို အောင်မြင်မှုအပေါင်းက ဆီးကြိုနေတာကတော့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုရဲ့ ရလဒ်လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဒီကာကွယ်ဆေးရဲ့ သက်ရောက်မှုအချိန်ပမာဏကို သိချင်နေကြသလို အင်အားအလုံအလောက်ရှိပြီးမှ တိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်မှု စွမ်းရည်မြင့်မားလာခြင်း ဟုတ်မဟုတ် သိဖို့လိုအပ်လာတဲ့အပြင် ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ လိင်တူဆက်ဆံလို့ ကူးစက် သူတွေအပေါ်မှာရော အကာအကွယ်ပေးနိုင်သလားနဲ့ ဒါမှမဟုတ် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ကူးစက်သူတွေအပေါ်မှာရော ဘယ် လို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကို အတော်လေးသိချင်နေကြတယ်။ ဒီရောဂါကာကွယ်ဆေးဟာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရပြီးသား လူတယောက်ရဲ့ သွေးအပေါ်မှာတော့ ဘယ်လိုမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ ခုခံအားနည်းပါးမှုအပေါ်မှာ အကန့် အသတ်နဲ့ ချေဖျက်နိုင်ရှိလားဆိုတာနဲ့ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးသား သူတွေအပေါ်မှာထပ်ပြီးဆိုးကျိုးကို ဖြစ်သလားဆိုတာကိုတော့ နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ သမရိုးကျမဟုတ်တဲ့ အစပျိုးအောင်မြင်မှုဟာ အလွန်တရာကိုအရေးပါလှသလို သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေကတော့ ဒီရောဂါအပေါ် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ မှန်းဆတွက်ချက်နေတုန်းပဲ ဆိုတာရယ် အဆုံးသတ်ကောက်ချက်ဆွဲလို့မရသေးသည့်အတွက် ဆန္ဒစောပြီးမထုတ်ဖော်ဖို့အင်မတန် အရေးကြီးကြောင်း ဖူဆီ က ကောက်ချက်ချ သုံးသပ်သွားတယ်။
Posted by tailengtai တိုင်းလှိုင်တိုင်း at 4:58 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Amount lost in junta’s Four Cuts campaign recounte...
အရှင်ဆန္ဒာဓိက အမေရိကတွင် ခွဲစိတ်ကုသမှု ထပ်မံခံယူ ဓာတ...
သျှမ်းအကြောင်းသုတေသနညီလာခံ ချူလာလုံးကွမ်း တက္ကသိုလ်...